Manangana trano tsena biriky mirefy 1,5 metatra ireto tompon’andraikitry ny tsena ireto ary amidin’izy ireo 1.200.000 ariary ka hatramin’ny 3.000.000 ariary amin’ireo mpivarotra izany. Tsy manana io vola io, ireto farany ary tratran’ny tsindry hazo lena ataon’io delege io. Olom-bitsy no nambaran’ireto mpivarotra, fa mahazo tombony amin’io trano biriky io ary lasa kiantranoantrano aza no niafarany. Nanangana ny fikambanana atao hoe E.TA.MI. na Etale Mitambatra koa io delege io, izay tsy teny nierana na nakana ny hevitr’ireto mpivarotra ireto, fa nataon’ny delege fitadiavam-bola, io fikambanana najoro io. Tsy fantatry ny eo anivon’ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo io olana tsena io amin’izao, koa manao antso avo amin’ny Ben’ny tanàna sy ny tompon’andraikitra voakasika ireo mpivarotra. Marihana fa voakitik’io fananganana tsena io ihany koa ireo mpivarotra eo amin’ny CsbII Andravoahangy. Tsy mankasitraka ny hananganana io tsena biriky io, ireto mpivarotra ireto ary hisy ny hetsika lehibe ataon’io fikambanan’ny FI.MPI.E.A io, ny alarobia ho avy izao.
Fanatsarana no atao, hoy ny delege
Miaina ao anatin’ny loto sy ny fako ary ny fofona ireo mpivarotra eny amin’ny tsenan’Andravoahangy, ka nahatonga ny delege sy ny lehiben’ny tsena hanatsara ny tsena. Misy koa ireo tsena maty eny an-toerana, ka ny mba hampandrosoana izany no tanjona, hoy izy ireo.
Ny fikambanana Etami na Etale Miray hina no nijoro voalohany, izay vao ny FI.MPI.E.A na Fikambanan’ny mpivarotra Etale Andravoahangy. Nokianin’ity fikambanana ity ho nandray volabe tamin’ireo mpivarotra mantsy ny delege sy ny lehiben’ny tsena. Nambaran-dRtoa Raharimalala Felicien, filohan’ny fikambanana Etami, fa ireo mpivarotra asa tanana sy ireo mpivarotra isaka ny alarobia no manakorontana io fanatsarana ny tsena io. Tsy maintsy diovina ny tsena ary havadika trano biriky ireo tsena hazo izay atahorana hitera-doza, hoy hatrany ity delege ity.